Sheekh Shariif oo soo saaray baaq cusub kadib heshiiskii shalay lagu gaaray Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Shariif oo soo saaray baaq cusub kadib heshiiskii shalay lagu gaaray...
Sheekh Shariif oo soo saaray baaq cusub kadib heshiiskii shalay lagu gaaray Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay heshiiska shalay lagu gaaray magaalada Muqdisho ee horseedaya in magaalada laga saaro ciidamadii ka dhashay muddo kororsiga ay sameeyeen Mursal iyo Farmaajo.
Sheekh Shariif ayaa ku baaqay in kadib heshiiskaas gacmaha la isku qabsado sidii looga gudbi lahaa marxaladdan adag ee kala guurka, iyadoo wax kasta lagu bixinayo dib uheshiin, isqancin iyo isku tanaasul.
Hoos ka aqriso qoraalka uu oo soo saaray madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Waxaan soo dhaweynahaa heshiiska laga gaaray rabshadihii ka dhashay muddo kordhintii sharci darrada ahayd, anigoo codkayga ku biirinaya in ciidamada qalabka sida ee geesiyayaasha aan marna la siyaasadeyn oo ay ku laabtaan xarumahoodii.
Waxaan kaloo bogaadinayaa dadaalada Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Xil-Gaarsiinta, iyadoo aan ka rajeyneyno in heshiis laga gaaro doorashooyinka iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 September.
Waxaan ku celinaynaa markale in gacmaha la isku qabsado sidii looga gudbi lahaa marxaladdan adag ee kala guurka, iyadoo wax kasta lagu bixinayo dib uheshiin, isqancin iyo isku tanaasul.
Waxaan u mahad celinayaa guddiyadii kasoo shaqeeyey heshiiska iyo saraakiishii badbaadiyay dalka, maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe, iyo sidoo kalena saaxiibada caalamka ee waqtiga ku bixiyay in lagu laabto heshiiskii 17 September 2020.